China Air Deodorizer ukwenziwa kunye nefektri | FIZA
UMYALEKI Womoya UKUHLAWULWA
BULA I-BACTERIA NE-VIRUS Phelisa I-ODOR KUNYE NEE-smells ezingathandekiyo
-Isiphumo sale mveliso sivavanywa kwindawo evaliweyo, isiphumo esona singahle sohluke ngokuxhomekeka kwindawo oyisebenzisayo.
Imveliso yethu ayinakubulala zonke iintsholongwane zangaphakathi kunye neentsholongwane.
-Kuxhomekeka kwimeko yomoya nakwindawo esingqongileyo, isiphumo sale mveliso sinokungafani.
Thatha le mveliso ngaphandle kwengxowa yangaphandle kwaye ukrazule itywina eliqhotyoshelwe kwingxowa yangaphakathi yealuminium
Ngokwesiqhelo inyanga e-1
Pls ngokufunda ngononophelo izilumkiso ngaphambi kokuyisebenzisa kwaye zigcine ngokufanelekileyo
- Nceda ugcine le mveliso kude nabantwana kunye nezilwanyana zasekhaya.
-Le mveliso ayityiwa, xa iginyiwe, isela amanzi amaninzi kwaye ikhafula imixholo. Ukuba unxibelelana nolusu okanye amehlo, hlamba ngamanzi amaninzi ahambayo. Ukuba kusekho ezinye iimeko ezingaqhelekanga, nceda ubonane nogqirha.
-Ukuba usebenzisa ngaphakathi, ukuba ivumba linamandla kakhulu okanye libangela iimvakalelo ezingathandekiyo, nceda uyeke ukulisebenzisa kwangoko kwaye ungene umoya kwigumbi.
-Ndicela ungayivumeli imveliso ukuba idibane ngqo nolusu lwakho.
-Xa uthatha umthambo kwaye ulale, ii-pls azisebenzisi.
-Ungayisebenzisi le mveliso ukulungiselela ezinye izinto.
-Le mveliso ineziphumo ezithile zokukhanya. Xa usebenzisa, nceda vumela icala elinomngxunya womoya kude neempahla okanye iimveliso zesikhumba.
-Iziqulatho zale mveliso (ClO₂) zonakalisa isinyithi, nceda ugcine kude intsimbi xa uyisebenzisa.
- Sukuyigcina phantsi kobushushu obuphezulu okanye ngokuthe ngqo elangeni.
-Ukuyisebenzisa ngaphandle okanye kwindawo enomoya ojikelezayo olungileyo, isiphumo esilindelweyo sinokungafezekiswa.
Egqithileyo I-Chlorine Dioxide Air Sanitizer
Okulandelayo: I-NBR iLatex
Isicoci soMoya esiHlaziya umoya